မင်ဒီစီမံကိန်းစီမံကိန်း ၆၊ အပိုင်း ၈ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - နယ်နိမိတ်မရှိသောဆရာဝန်များ - ဟူးလူ
မင်ဒီစီမံကိန်းစီမံကိန်း ၆၊ အပိုင်း ၈ ပြန်လည်စုစည်းခြင်း - နယ်နိမိတ်မရှိသောဆရာဝန်များ
Mindy Project Season 6
New York, NY - May 03: 'The Mindy Project' မှမင်းသားမင်းဒီ Kaling သည်နယူးယောက်မြို့၊ မေလ ၃ ရက်၊ မေလ ၃ ရက်၊ Madison Square ဥယျာဉ်ရှိ Theatre ပြဇာတ်ရုံ၌ Hulu Upfront တင်ဆက်မှုတွင်စင်မြင့်ပေါ်တွင်တင်ဆက်သည်။ (Hulu အတွက် Dia Dipasupil / Getty Images မှဓာတ်ပုံ)
Stranger Things2easter eggs: 80s တိုင်းကိုကိုးကားရန်လမ်းညွှန် သူစိမ်း - ဘာကြောင့်နန်စီနဲ့ယောနသန်ကိုတစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အကျိုးပြုတာလဲ
နယ်စည်းမခြားဆရာဝန်များ, The Mindy စီမံကိန်းရာသီ6၏အပိုင်း 8, Mindy ဒန်နီရဲ့အမေ Annette ကြီးမားတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ထားပြီးနှင့်ဂျိုဒီမာရိကိုလိုက်ရှာကြောင်းထွက်ရှာတွေ့။
ဖတ်ရမည်Hulu Live ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
၏နောက်ဆုံးဇာတ်လမ်းတွဲ မင်ဒီစီမံကိန်း၊ နယ်နိမိတ်မပါဘဲဆရာဝန်များ, Annette (Rhea Perlman), ဒန်နီရဲ့ ma နှင့်မာရိ (Ana Ortiz) ၏ဂျိုဒီရဲ့လိုက်ရှာအာရုံစိုက်။ Mindy နှင့် Morgan လွန်ခဲ့သောလများကသူတို့ကင်ဆာပညာရပ်မှယူသောပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်စက်ကိုပြန်ပို့သောအခါသူသည် Annette ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Mindy သူမဆုံးရှုံးသွားတယ်လို့ထင်ပေမယ့်သူမကသူမရင်သားမှာတွေ့ရတဲ့စူးအကြောင်းဆရာ ၀ န်နဲ့အတူလိုက်ရှာဖို့ထွက်လာတယ်။ Mindy အံ့အားသင့်, Danny သူမ၏မပြောထားပါကပြောပါတယ်။ Annette ဒန်နီကိုပြောသည်နှင့် Mindy သူမ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျိန်ဆိုစေသည်မထားပါဘူး။ Mindy ဟာသူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးဓာတုဗေဒပထမပတ်အတွက် Annette နဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Dot နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။
Mindy ကသူမပျောက်ဆုံးသွားတယ်လို့ထင်ပေမယ့်သူမကသူမရင်သားကင်ဆာမှာတွေ့ရတဲ့စူးအကြောင်းဆရာ ၀ န်နဲ့အတူလိုက်ရှာဖို့ထွက်လာတယ်။ Mindy အံ့အားသင့်, Danny သူမ၏မပြောထားပါကပြောပါတယ်။ Annette ဒန်နီကိုပြောသည်နှင့် Mindy သူမ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကျိန်ဆိုစေသည်မထားပါဘူး။ Mindy ဟာသူမရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းပြီးဓာတုဗေဒပထမအကျော့အတွက် Annette နဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း Dot နဲ့ပူးပေါင်းခဲ့တယ်။
မာရိထံမှငြင်းဆန်ခြင်း၏ပြင်းထန်သောခံစားမှုဂျိုဒီသည်ဂျယ်ရမီနှင့်မော်ဂန်တို့၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူသည်။ သူတို့ကသူတို့အဘို့အလွန်းအမြိုးသမီးမြားနှငျ့အတူနှစ် ဦး စလုံးနေနှင့်ဂျိုဒီမေရီနှင့်အတူဇွဲဖြစ်သူမကပိုကောင်းတဲ့လုပျနိုငျစဉ်းစားပါဘူးသည်အထိသူမ၏ချဝတ်ဆင်ရန်အကြံပေးခဲ့သည်။ နီကစ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သူကအဘို့အသွားပေမယ့်သူမချက်ချင်းရက်စွဲတစ်ခုသဘောတူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ thru အတိုင်းလိုက်နာရန်မလိုအပ်ပါဘူး။
Netflix ရှိ Bigfoot မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် Sasquatch?
သူတို့အတူတူညအတူတူနေ။ သူကသူမသာ fling ကိုစိတ်ဝင်စားရဲ့သဘောပေါက်သည်အထိဂျိုဒီသည်ပျော်ရွှင်သည်။ သူမသည်တစ် ဦး လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာမစ်ရှင်အပေါ်သွားကြဖို့တိုင်းပြည်အသကျရှငျရဲ့။ နောက်တဖန်သူသည်တက်ကြွသောနှစ်လုံးကိုလှည့်နှင့်သူတို့ကသူ့ကိုထဲကသူ့ကိုတွှေဖို့သူ့ကိုအကြံပေးသည်။ ထိုဒေသရှိကျန်းမာရေးနှင့်ဘေးအန္တရာယ်များအကြောင်းပြောပြရန်ဂျိုဒီ၏အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်တန်းစီပါ။ မာရိသည်မလှုပ်မရှားဖြစ်နေဆဲဖြစ်ပြီးသူ၏တာဝန်ကိုဆက်လက်ထမ်းဆောင်နေဆဲဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတော့သူက Mindy ကိုလှည့်ပြီးသူမကမိတ်ဖက်တစ်ယောက်လိုချင်တဲ့သူတိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ သူမတစ် ဦး ပေးပို့အလယ်၌ဖွင့်နေစဉ်ဂျိုဒီ, မာရိသညျအလျင်အမြန်တောင်းပန်, ပြီးတော့သူကမစ်ရှင်အတွက်သူမ၏ join မယ့်ကပြောပါတယ်။
အဘယ်သူသည်မင်းသမီး Emma roberts ချိန်းတွေ့သည်
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်မင်းတုန်းမင်းသည်ဓာတုခန်းထဲတွင်ကြီးမားသောအငြင်းပွားမှုများရှိနေသောကြောင့် Mindy သည်ကင်ဆာပညာရပ်သို့ခေါ်ဆောင်ခံရသည်။ Annette က Dot ကိုသူမလိုချင်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုလိုချင်တယ်လို့စွပ်စွဲခဲ့တယ်။ ဆင်ခြင်တုံတရား၏အသံဖြစ်ဆက်လက်မင်းဒီ, သူမ၏, သူမတစ် ဦး အလိုတော်ရှိသင့်တယ်, သူမ၏ပြောထားသည်။ သူမသည် Annette အတူတူကဆွဲမထားဘူးဆိုရင်သူကဒန်နီကိုပြောပြရန်ခြိမ်းခြောက်နေသည်။
လမ်းကြောင်း - ဤသည်ကိုငါတို့ကြည့်ရှုရန်မည်သို့ရာသီ2အခမဲ့ဖြစ်သည်
အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အဆုံးမှာ snarky ကင်ဆာပညာရပ် Mindy ရဲ့ရုံးခန်းသို့ Annette ရဲ့ဆွယ်တာအင်္ကျီကိုယူဆောင်ခြင်းနှင့်ဂျယ်ရမီသူဒန်နီကပြန်လာလိမ့်မယ်ကပြောပါတယ်။ ဒန်နီကကင်ဆာရောဂါအကြောင်းသူ့ကိုဘာကြောင့်မပြောခဲ့သလဲဆိုတာသူသိချင်ခဲ့တယ်။
လူစီဖာရာသီ 5, အပိုင်း 1 ဇာတ်သိမ်းကရှင်းပြသည်
Stranger Things ပန်ကာအနုပညာစုဆောင်းမှု (ဓါတ်ပုံများ)
Black Lightning ကို The CW တွင်ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီးရာသီ4ပြီးဆုံးသွားမည်ဖြစ်သည်
Netflix တွင်weekendပြီ ၂၄ မှ ၂၅ ရက်အထိကြည့်ရှုရန်အကောင်းဆုံးပွဲ ၅ ခု
နှစ်ပေါင်းမှတဆင့် Grey ရဲ့ခန္ဓာဗေဒရဲ့ 30 အကောင်းဆုံး guest ည့်သည်ကြယ်
လိမ္မော်ရောင်သည် New Black Quiz - သင်၏အကြိုက်ဆုံးအကျဉ်းသားများကိုအဘယ်ကြောင့်ချုပ်နှောင်ထားသနည်း
Netflix မှအကောင်းဆုံးရုပ်ရှင် ၅၀ - စနေနေ့ညအဖျား
ခရစ္စမတ်သည် Netflix ပေါ်ရှိ Kranks နှင့်အတူရှိသလား။
အဘယ်ကြောင့်မူလ Dawson ရဲ့ Creek အဘိဓါန်ဆောင်ပုဒ်သီချင်း Netflix ကအပေါ် featured လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ထူးခြားဆန်းကြယ်သောအရာ (၄) ခုပိုစတာသည်အဘိုး၏နာရီ (ပန်ကာအနုပညာ) ဖြင့်အချိန်ခရီးသွားခြင်းကိုကန့်ကွက်သည်။
ရာသီ2အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများ ၁၃ Netflix သည်ဆယ်ကျော်သက် drama အသစ်တစ်ခုကိုပြန်လည်စတင်ခဲ့သည်
Jimmy halpert ၏စွန့်စားမှု
ဘယ်အချိန်နောက်ဆုံးနိုငျငံတျောရာသီ2စတင်ပါဘူး
oitnb ၏ရာသီ5Netflix အပေါ်ထွက်လာကြပါဘူးသည့်အခါ
100 ၏ရာသီ5Netflix မှလာမယ့်အခါ
Freakish: Hulu ဟာတတိယရာသီအတွက်သိပ္ပံဝတ္ထုကိုသက်တမ်းတိုးမှာလား။
Daredevil ရာသီ ၃ နှင့် Iron Fist ရာသီ ၂ သည်ယခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်စတင်ထုတ်လုပ်သည်
None of None ရာသီ2မူးရူးကြည့်နိုင်သောလမ်းညွှန်
S.H.I.E.L.D. ၏အံ့’s ခြင်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ် Watch ယခု2Netflix တွင်ရာသီ
အပျိုစင်မြစ်ရာသီ (၃) သက်တမ်းတိုးခြင်းကြေငြာချက်က (လုယူသူ) သည်အသက်ရှင်နေသည်